Shiinaha qalin soosaarayaasha polyamide dahaarka / gaashaan saareyaasha dharka iyo alaab | 3L Tex
Miisaanka: 110g ± 5g
Daaweynta la heli karo: Daaweynta ka hortagga oksidheynta
Tirada Min.Order: 120M
Astaamaha ugu muhiimsan: Cadaadis aad u hooseeya, gaashaan hirarka elektromagnetic, shucaaca anti-shucaaca, bakteeriyada, deodorant (diidmada), baabi'inta korantada ma guurto, muruqa kiciya, nidaamiya heerkulka jirka, anti-UV, cagaar dabiici ah, hawo sarreysa
Dhar polyamide dahaarka ah oo saafi ah
Dharka gaashaan ee ugu wanaagsan ee shaqooyinka ka hortagga bakteeriyada, qalinka lagu dahaadhay waxyaalaha salka leh ee poly amide / nylon, waa dhar badan oo iska caabiya, jilicsan oo raaxo leh. Waa badeecad tiknoolajiyad sare leh oo lagu helo iyadoo si joogto ah lacag loogu xidho maaddada nylon iyada oo loo marayo farsamo casri ah oo gaar ah. Qaab-dhismeedkani ma aha oo kaliya inuu ka dhigo fiber-ka lacag inuu ilaaliyo hantida asalka ah ee dharka, laakiin sidoo kale wuxuu siinayaa dhammaan howlaha sixirka, saameynta lacagta. Maaddaama ay tahay wax dabiici ah, lacagta ayaa gebi ahaanba caafimaad leh, deegaan / cagaaran iyo keyd ah.
Feature Main: Iska caabin aad u hooseysa, waxqabadka gaashaanka sare, gaashaamidda hirarka elektromagnetic-ka, shucaaca anti-bakteeriyada, bakteeriyada, dheecaanka (diidmada), baabi'inta korantada ma guurtada ah, muruqyada kiciya, xakameynaya heerkulka jirka, ka hortagga UV, cagaarka dabiiciga ah, hawo sarreysa, la dhaqi karo / dib loo isticmaali karo. Dhalaalaya, xariir dareen jilicsan.
Codsiyada ugu muhiimsan: Waxyaabaha ugu fiican ee gaashaan, shucaaca ka hortagga, dharka casriga ah, qalabka iyo dharka guriga, dharka ka hortagga bakteeriyada, maaskarada, galoofyada iyo dharka guriga, alaabada caafimaadka, isboortiga, faa'iidada muruqyada, alaabooyinka la isweydaarsado, alaabada ka hortagga ah.
Heerka soo noqnoqda iyo waxtarka gaashaanka:
Heerka soo noqnoqda: 9KHz-40GHz
Waxtarka gaashaanka: 60.0dB-71.0dB
Diidmada dusha sare: 0.2 Ohm / Cm
Mabda'a gaashaan-ka-hortagga korantada ee korantada:
Lacagta ayaa si aad ah u dhaqmeysa waxayna leedahay shaqo gaashaaman koronto. Marka dadku xirtaan dharka / qalabka mawjadaha kahortaga-elektromagnetic-ka si ay ula xiriiraan aaladda elektarooniga ah, dharka mowjadda kahortaga korantada wuxuu si dhaqso leh oo wax ku ool ah u qaban karaa hirarka elektromagnetic-ka, taasoo markaa ka ilaalinaysa jirka mowjadaha elektromagnetic-ka.
Abakteeriyada Noocyada: fayrasyada uu ku dhaco mareenka neefsashada - Iskuul-19, H1N1, Hargab, candida albicans, staphylococcus Aureus, eschenchia coliform iwm.
Mabaadi'da: Dharka qalinka ah wuxuu sii daayaa ion lacag ah kaas oo ka qaadi doona borotiinka enzyme dusha sare ee bakteeriyada iyo nooleyaasha kale, taas oo markaa burburinaysa qaab-dhismeedka bakteeriyada, oo saameyn ku leh jiritaankiisa, iyo gaaritaanka ujeeddada bakteeriyada.
Ion Silver waxay dili karaan 99.99% fayrasyada uu ku dhaco mareenka neefsashada, Covid-19, H1N1, hargabka daqiiqado gudahood. Natiijada baaritaanka ee ka timid Machadka Microbiology iyo Epidemiology ee Akadeemiyada Cilmiga Caafimaadka ee Milatariga ayaa muujineysa in dharka ka hortaga fayrasku uu dili karo ama xakamayn karo hargabka A iyo hargabka waqti yar.
Anigawareega dhiigga Fiberka qalinku wuxuu kobcin karaa microcirculation, qoyaan iyo dhuuqmada dhididka, waxay si wax ku ool ah u wanaajin kartaa wareegga dhiigga. Shaashado caafimaad oo bakteeriyada lagu neefsado ah, jilbaha jilbaha, guutooyin (Noocyada xididdada Varicose, sonkorowga, arthritis)
Murqaha kiciya: loogu talagalay koronto kicinta caafimaad, murqaha kiciya jir ahaan.
Caqli badandareeraha caqliga Produts:
Iyada oo leh dareen aad u sarreeya, dharkeenna qalinka ah ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa alaabooyinka dareemayaasha caqliga leh, nigiska casriga ah, dharka, qalabka iyo dharka guriga.
Hore: Dhar spandex dahaarka leh oo hufan / dhar gaashaan leh
Xiga: RFID Dhaqanka mesh
Dhar hufan oo hufan / gaashaan huwan
Double wajiga maro tabinta
Double wajahay dabka u adkaysta dhar tabinta
Gacan-gashiyada Silver (jeermiska dila bakteeriyada / dila)